Akụkọ - BXL Creative meriri onyinye anọ A'Design
Sọpụrụ & kwuo
VRlọ ọrụ VR
Shu Uemura Limited Onyinye Pac ...
RealWarm Njikere iri nnụnụ ...
Ebighi-ebi Mma nke Dunhu ...
Shredder Skin Nlekọta Set
Oge anọ na-esi kandụl
Ihe na-esi ísì ụtọ gramophone
Njem Qingyan · Njem Njem
Kingfisher Lipstick ipigide
Yuyan achara wepụ
A'Design Award bụ asọmpi imepụta mba ụwa na-eduga kwa afọ. Ọ bụ asọmpi mba ofesi nke International Federation of Graphic Design Associations, ICOGRADA, na European Design Association, BEDA ghọtara. Ọ Aims pụta ìhè na ndị magburu onwe iru eru nke kacha mma aghụghọ, imewe echiche, na imewe na-edebere ndị na ngwaahịa na ụwa niile kere ihe ọzụzụ na ụlọ ọrụ; na-enyere ndị asọmpi aka ịdọta uche ndị mgbasa ozi, ndị mbipụta akwụkwọ, na ndị azụ ahịa; na-emewanye ka ewu ewu na aha ha; na-agba ha ume ịmalite atụmatụ dị mma, wee si otú a mee ka ọdịnihu dị mma.
Site na ndepụta a, ị nwere ike ịmụ mba ndị na-eduzi ụwa n'ọhịa nke ime ụlọ, ejiji ejiji, na imepụta ụlọ ọrụ. I nwekwara ike ịmụtakwu banyere ndị nrụpụta dị iche iche sitere na mba na mpaghara, ghọta ka ọrụ ha kachasị ọhụrụ si akwalite mmepe imewe ọgbara ọhụrụ.
N'otu oge ahụ, ọrụ A'Design Award na-enye ohere ibipụta ọrụ n'ụwa niile. Kọmitii na-ahazi ga-enyere ndị na-emepụta okike aka na ụlọ ọrụ mmalite ga-ezute ndị na-etinye ego iji chọpụta echiche ngwaahịa ha.
Xiaohutuxian Xinyouran Wine Boxes nke Bxl Jupiter Team
"Xinyou ran" bu aha ochie, udi akara bu amamihe, amamihe bu onye nnochite anya nke akwukwo, na China enwere akwukwo ndi China - achara slips, na enweghi akwukwo ochie, ndi China na eji ihe achara ederede ederede, gbasaa amamihe. Anyị mere igbe mmanya ka ọ ghọọ nsị achara. Ọ bụ ngosipụta nke amamihe kpọmkwem. Anyị mere oghere nke igbe mmanya na-aba n'anya n'otu ụzọ ahụ dị ka nsị achara. Nmeghe nke mmanya na-aba n'anya dị ka imeghe akwụkwọ jupụtara na amamihe.
Sisi Don bụ Wulianghong Liquor Packaging
A na-emebe ihe a site na ihuenyo ahụ, ngwá ụlọ ndị China. Ndị na-ese ihe na-agbara uhie uhie (agba mba) nke China, ihe ịchọ mma (nka mba), na peony (ifuru mba) n'ime ngwugwu site na usoro dị iche iche, na-egosipụta oke mma ndị China.
Bancheng Longyin Mountains White Wine Bottles nke Yuejun Chen
Dika mmuta nke ihe omuma banyere odida obodo China na eserese ink, a na-agbanwe ngwaahịa a site na eserese ala ka ọ bụrụ ụdị echiche imepụta ihe nke China na amara China. Site na gburugburu dị ka ụdị ya bụ isi, ugwu nke nwere ọnụ ọnụ dị ka isiokwu ya nwere ihe niile, si otú a na-egosipụta ọdịmma na mmekọrịta enyi na enyi, Ọwụwa Anyanwụ nke China, na ịgbasa ma na-akwalite ọdịnala ndị China.
Jing Yang Chun Wu Yun Liqueur Mbukota Igbe Nchedo site Bxl Jupiter Team
Oke mmiri, otu n’ime ihe ochie anọ, na - akọwapụta ọtụtụ ihe ọpụrụiche dị ndụ nke ndị dike mgbe ochie nwere ọmarịcha ọrụ nka ya. Otu n’ime ha bụ na Wu Song gburu agụ. A na-ekwu na Wu Song drankụrụ iko asatọ nke mmụọ tupu njem ahụ, na-agbasa ahịa "atọ atọ anaghị agafe ugwu"
Ruo ugbu a, BXL Creative 's ndepụta nke onyinye emeela ume ọhụrụ. O meriela onyinye nturu ugo 73 nke mba ụwa, mana anyị agaghị akwụsị ebe a. Otuto ohuru bu ihe ohuru. Nrite abụghị naanị nsonazụ, mana ọ bụ mmalite ọhụụ.
Daalụ, A'DESIGN, maka nkwenye gị na ịkwado anyị! Anyị ga-agbagha onwe anyị oge niile, mee ka ngwaahịa ju ebe niile n'ihi okike okike, wee mee ka ndụ ka mma n'ihi ihe ọhụrụ.
Nke gara aga: BXL Creative Won Three iF Design Awards
Osote: BXL Creative meriri "China Patent Award" na "China Excellent Packaging Industry Award".
Thlọ 6, Mkpokọta Otu, Shenye Jinyuan Building, Qingshuihe, Luohu, Shenzhen, CHINA, 518023.
Banyere BXL Creative
kpọtụrụ bxl kere otu!
Rịọ ngwaahịa gị taa!
Anyị nwere obi ụtọ ịzaghachi arịrịọ gị na ajụjụ gị.